Ezumike ezumike ezinụlọ na Europe nwere ike ịmasị ndị nne na nna na ụmụaka nke afọ ọ bụla ma ọ bụrụ na ị hazie ya nke ọma. Europe bu ala ulo uku na akwa mmiri, Ogige ntụrụndụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na ebe a na-echekwa ebe ụmụ agbọghọ na ụmụ nwoke nwere ike ime ka hà bụ ụmụ eze na ndị isi maka otu ụbọchị. Enwere nnukwu ụzọ ụkwụ na ọtụtụ ntụpọ maka ihe nkiri na nnukwu n'èzí, ma iso ụmụaka eme njem bụ ihe ịma aka.
Ihe nzuzo nye ezumike ezumike ezinụlọ n’abia bụ mgbe ezi na ụlọ nile nọ n’ụgbọ ma nwee ọ excitedụ. Europe jupụtara na akara ngosi dị ịtụnanya, nkiri, ogige ntụrụndụ, na ebe nleta, na inwe ụmụ gị na-ekere òkè na-eme atụmatụ njem gị na Europe ga-aghọ a nrọ ezumike. Mee nyocha gị tupu oge eruo, họrọ ebe nlegharị anya ịchọrọ ịga, na ntụpọ ụmụ gị ga-ahụ n'anya, ma mgbe ahụ ka ụmụaka bulie 3-4 ebe nkiri na ndepụta. Wayzọ a na onye ọ bụla nwere obi ụtọ ma nwee ihe ọ na-ele anya kwa ụbọchị.
Enwere ike ịnweta ọtụtụ ogige ntụrụndụ via ụgbọ okporo site na nnukwu obodo. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ tupu oge eruo ma bịa na njikere, ọ dịghị ihe kpatara na ị gaghị ekpori ndụ n’èzí ma nwee ọ airụ na ikuku ọhụrụ, ọhịa, na ogige ntụrụndụ.
Knowingmara ụzọ ị ga - esi ga - aga mba ọzọ dị oke mkpa mgbe gị na ụmụaka na-eme njem. Chọghi efufu ma jegharia n’obodo jiri ụkwụ ma ọ bụ si n’ọdụ ụgbọ elu na-eme njem, n'agbanyeghị ihu igwe. Ya mere, atụmatụ na ntinye akwụkwọ gị n'aka nke iga na Europe ga-ekwe nkwa a oké ezinụlọ ezumike.
I kwesịrị ịma na ụlọ nri na Europe anaghị enye ụmụaka nri, ya mere ndị okenye ya’ òkè maka onye ọ bụla. Nke a dị mkpa karịsịa ịkọwapụta ma ọ bụrụ na ị na-aga travelingtali, ị gaghị ahụ nri pizza ma ọ bụ pasta nke ụmụaka, ya mere jikere.
Nwere ike iji aka maapụ na akwụkwọ na ngwa mee ya niile n'onwe gị, mana isonye n’ụgbọ mmiri ma ọ bụ ịgagharị njem kachasị mma. N’ọtụtụ obodo ndị dị na Europe, enwere njem njegharị na-akwụghị ụgwọ yana onye ndu mpaghara. Ntuziaka a na-eji obi ụtọ ga-egosi ma gwa nzuzo nzuzo nke obodo ahụ, na-enweghị ị na-efu n'okporo ámá 'maze. Onye ndu ahụ ga-egosikwa ụlọ oriri na ọ localụ localụ ndị dị na mpaghara nri nri ehihie ma nye ndụmọdụ kachasị mma banyere ihe a ga-eme n'obodo ahụ.
Ọtụtụ obodo ndị dị na Europe ga-enwe carousel na-enwu gbaa ma maa mma na nnukwu obodo. Kama ịgbaga na saịtị ọzọ, Kwụsị, ma kwe ka kiddos na-aga dị ka ọtụtụ ịnyịnya ka ha chọrọ. Na-ekpori ndụ ịnyịnya carousel mgbe Eiffel Tower dị n'azụ gị, bu oge echefu echefu diri umuaka na ndi okenye.
You chọrọ Embed anyị blog post “10 Best Tips For Family Ezumike Na Europe” jidesie gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://embed.ly/code?url =Https://www.saveatrain.com/blog/tips-family-vacation-europe/ የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, you will find our most popular train routes – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml, ma ị nwere ike ịgbanwe / ja ka / es ma ọ bụ / de na ọtụtụ asụsụ.
Europewithkids Ezinaụlọ familytrip Familytripeurope familyvacation traintravelwithkids